Sivana Nihanjahanja: Fahitalavi-panjakana Iraniana Manapaka Fandaharana Eny Antenantenan’ny Fehezanteny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Avrily 2017 14:11 GMT
Nanomboka nalaza tamin'ny fanasongadinana ireo sivana amin'ny fahitalavitra Iraniana ilay tenifototra #نگم_بقایی_رو mandika ny fanontanian'i Nouri,”Tsy tokony nanonona Baghaei ve aho?”.
Nanomboka tamin'ny 11 Aprily ary hitohy mandritra ny dimy andro ny fisoratana anaran'ireo kandidà ho an'ny fifidianana filohan'ny repoblika faha-12 ao amin'ny Repoblika Isalmikan'i Iràna, harahin'ny vanim-potoana izay hijerena ny fahaizana ara-politika sy islamikan'ireo olona nisoratra anarana ho ataon'ny Filànkevitr'ireo Mpiambina sy ny fikambanana ara-pivavahana napetraka hanao ny fanamarinana. Matetika no ahintsan'ilay Filankevitra ny ankamaroan'ireo olona voasoratra anarana.
Fantatra amin'ny fampidirana fitongilanana sy sivana amin'ny tatitry ny fifidianana ny IRIB. Nandritra ny fampielezankevitra ho an'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2013, maro tamin'ireo kandidà no nanamarika ny fandrakofana sy ny fampiasana sivana tsy an-drariny tao amin'ny IRIB. Nampangain'i Rouhani ho nanala baraka olo-malaza ilay fahitalavi-panjakana nandritra ny resadresaka tamin'ny 27 May 2013, rehefa injay ny fampielezankevitry ny kandidà liam-pivoarana Mohamad Reza Aref niampanga ny IRIB ho nanapaka taminà “fomba tsy mendrika” ireo fivoahany nandritry ny fampielezankevitra.
16 ora izayArabia Saodita